Vaovao - Fivoarana sy fiandrasana ny orinasanay amin'ny 2021
FAMPANDROSOANA SY FANANTENANA NY ORINASA ISIKA AMIN'NY 2021
Tamin'ny 2021, nitombo intelo farafahakeliny ny vidin'ny bisikileta elektrika. Izany no bcz amin'ny vidin'ny vy efa lehibe ary koa fitaovana hafa. Tsy marin-toerana ny tsena ary koa ny toedran-dranomasina. NYTianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. mandinika hatrany ny fironana amin'ny tsena, mifehy faran'izay tsara ny kalitaon'ny vokatra ary tsy manelingelina ny filaminan'ny tsena iraisam-pirenena mahazatra. Mifehy ny vola lany amin'ny fiantohana ny kalitao. Ka tsy nisy fiatraikany lehibe tamintsika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ity taona ity.
Fampandrosoana sy fiandrasana
Ao amin'ny 2021, ny vokatra maininay dia mbola bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta an-tendrombohitra elektrika, scooter elektrika ary motera elektrika. Tamin'ity taona ity dia nifantoka tamin'ny fampandrosoana sy ny varotra bisikileta an-tendrombohitra ny ankabeazan'ny herinay. Ny vokatra vaovao dia karohina sy novolavolaina tsy tapaka mba hamaly ny filan'ny tsena miovaova .. vokatra tsirairay, na dia mampihena ny vidiny aza, mba hanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ny mpanjifa.
Tamin'ny taon-dasa, nafana be erak'izao tontolo izao ny tsenan'ny bisikileta. Saika feno ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny. Ka tokony hahita teboka orinasa vaovao isika. Izany no antony nanombohanay ny fampandrosoana ny bisikileta an-tendrombohitra herinaratra. Ity dia tokony ho ny tsena manaraka amin'ny ho avy.
elektrika Ny bisikileta an-tendrombohitra dia mahafeno ny filan'ny mpampiasa bisikileta tsotra sy ny herinaratra bisikileta mpampiasa. Rivotra vaovao ity - dia maitso. Izy io dia fitambarana haitao sy fanatanjahantena. Ny bisikileta elektrika dia manana fampiasa maro. Azo ampiasaina amin'ny fialamboly, fanatanjahan-tena ary fitaterana.
Izahay dia nanamboatra bisikileta an-tendrombohitra herinaratra vita amin'ny kodiarana, bisikileta an-tendrombohitra an-tsoavaly, bisikileta an-tendrombohitra mifono kodiarana matavy, bisikileta fanampiana torsiaka torque. Mazava ho azy fa misafidy môtô kodiarana aoriana isika, fa ankehitriny kosa dia môtô afovoany koa no novolavolaintsika. Ohatra ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra sy bisikileta elektrika manokana.
Fotoana fandefasana: Sep-06-2021